3 ၏ Samsung Galaxy A5, A7 နှင့် A2017 တို့ကိုမကြာမီတင်ဆက်နိုင်သည် Gadget သတင်း
3 ၏ Samsung Galaxy A5, A7 နှင့် A2017 တို့ကိုမကြာမီပြသနိုင်သည်
Samsung စက်ဟာဘယ်တော့မှရပ်တန့်သွားမှာပါ ကုန်ပစ္စည်းမရှိပါ။ အရာကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရှိခြင်းနှင့်ပြီးသား၎င်း၏လာမယ့်စျေးကွက်ဖြန့်ချိဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရာကိုပြင်ဆင်နေသည်။ ပြီးတော့နောက်ဆုံးနာရီပိုင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကိုမြင်တွေ့နိုင်ခဲ့ကြတာပါ ကောလာဟလအမျိုးမျိုးအရ Galaxy A3, A5 နှင့် A7 တို့ကိုမကြာမီတရားဝင်မိတ်ဆက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်.
ဤရွေ့ကားမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များ၏ကျနော်တို့ကဒီဆိပ်ကမ်းများပြီးသားမယ်လို့ရှိရာ Geekbench ၏ရလဒ်များအားဖြင့်သူတို့နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသိကြပြီ က က Galaxy A5 (2017)ဤမိသားစုသည်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည့် Exynos 7880 ရှစ် core ပရိုဆက်ဆာနှင့် 3GB RAM တပ်ဆင်လိမ့်မည်။ မိမိအစိတျအပိုငျးအဘို့ က Galaxy A7 (2017) Snapdragon 805 မှာ 3GB RAM ပါရှိပါတယ်။
လက်ရှိ A3 နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမျှမသိရှိရသေးသော်လည်းပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် Galaxy S5 ၏အောက်တွင်ရှိသည်။
ဒီဇိုင်းပိုင်းအရ Samsung စမတ်ဖုန်းအသစ် ၃ လုံးသည်၎င်းနှင့်အတူရောက်လာလိမ့်မည် ငါသတ္တုနှင့်ဖန်နှင့်အတူပြီးအောင်။ တိုးတက်မှုများအနက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ဗွေဖတ်စနစ်နှင့် optical stabilization ရှိသောကင်မရာတစ်လုံးကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၆ Galaxy A မိသားစု၏အလွန်နည်းပါးသည်။
ယခုတွင်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းထွက်ပေါ်လာမည့် Samsung အသစ်ကိုစောင့်ဆိုင်းရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံးမိုဘိုင်းပစ္စည်းမိသားစုများကိုပြန်လည်တည်ထောင်ရန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အစောပိုင်းအထိစောင့်ဆိုင်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အများစုကစိုးရိမ်ကြသည်။
Samsung Galaxy A3, A5, A7 မှာဘာသတင်းတွေကိုမိတ်ဆက်ချင်ပါသလဲ။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS »3၏ Samsung Galaxy A5, A7 နှင့် A2017 တို့ကိုမကြာမီပြသနိုင်သည်
Android Nougat 7.1, 7.1.1 နှင့် 7.1.2 ကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအနေဖြင့်သုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်